August 12, 2011 – democracy for burma
NLD Burma: Daw Aung San Suu Kyi and U Aung Kyi’s joint statement burmese
On August 12, 2011 August 12, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Press conference of Daw Aung San Suu Kyi and U Aung Kyi after the meeting
ထို့နောက်တွင် ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့သည် သတင်းထောက်များ၏ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားကြသည်။
၁။ မေး ။ ။ ကျနော် ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ် က ဦးလှိုင်ထွန်း အယ်ဒီတာချုပ်ပါ ဒုတိယအကြိမ် တွေ့ဆုံမူ ကနေ ဘယ်လို ကဏ္ဍ တွေ မှာ ထူးထူးခြားခြား သိသိသာသာ ပြောင်းလဲတိုးတက် လာမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့မျှော်လင့် ထားပါသလဲ ခင်ဗျာ…။
ဖြေ ။ ။ ကျမ တို့ဒီအထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်းပဲ ကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ တိုးတက် လာမယ်လို့ ကျမတို့မျှော်လင့် ထားပါတယ် နောက် အားလုံးပေါ့လေ တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ ဟာတွေ အားလုံးအတွက် နေရာတကာမှာ တိုးတက် မူ့ရှိမယ်လို့မျှော်လင့် ပါတယ် ။
မေးခွန်းတွေ က သိပ်မရှင်းလို့ ကျမ ကောင်းကောင်းနားမလည်ဘူးရှင်းရှင်း မေးပါနော်..။
မေး ။ ။ အရင်တပတ် တုန်းက ဒီလိုပဲ ယေဘူယျ သဘောပဲ ပြောသွားတာ ဖြစ်လို့ပါခင်ဗျ ။ ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာ ..ဥပမာ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စ စသည်ဖြင့် ဒီလိုကိစ္စ မျိုးတွေမှာ ဘယ်လို မျိုးတိုးတက် မှု့ တွေရလာမယ်လို့ ယူဆ ပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ကျမတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တိုင်းရင်းသား ကိစ္စ တွေမှာလဲ တိုးတက်မူ့ ရှိရမှာပဲ ဘယ်ဖက် မှာမဆို တိုးတက်မှု့ ရှိရမှာပဲ တကယ်တော့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် မီဒီယာအပါအ၀င်ပေါ့ တိုးတက် မူ့ဆိုတာ ရှိရမှာပေါ့။
၂။ မေး ။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တခေါက် ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် ကြေညာသွားပါတယ် အဲဒီမှာ သဘောထားကွဲလွဲနေမူ့ ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေမှု့တွေကို ဆွေးနွေး တယ်လို့ ပြောပါတယ် အဲဒါ က အစိုးရ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြား ကိုပြောတာပါလား ဒါမှမဟုတ် လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ အစိုးရနဲ့ အကြား ကိုပြောတာပါလား နောက် တစ်ခုက အဲဒီမှာ လဲ ပါပါတယ် …တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးတယ်လို့သိရပါတယ် …အဲဒီလိုဆွေးနွေးတာ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ပါတီ တရားမ၀င်ဘူးလို့ပြောထားတာ ရှိပါတယ် အဲဒီတော့ အဲကိစ္စ တွေ ကို ဆွေးနွေးတာပါလား ရှင်…။
(ဦးအောင်ကြည်)ဖြေ ။ ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမူ လျှော့ပါးရေး ဆိုတဲ့ကိစ္စ ဟာနေရာတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပါတယ် ။ သဘာဝ အားဖြင့် ကျနော်တို့က ( Diversity and Unity )ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာ မဆို လူတိုင်းမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှု့ ဆိုတာ ရှိနိုင်ပါတယ် သို့ရာတွင် ကျနော် တို့ ဟုတ်လား … အခု ကျနော် ပြောသွားတဲ့ အတိုင်းပဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ ကိုတော့ ကျနော်တို့ ဦးစားပေးပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမယ် ဆိုတဲ့ အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မေး ။ ။ ကျနော် ဦးအောင်ကြည် ကိုမေးချင်ပါတယ် ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြီးခဲ့ တဲ့တ ခေါက် တွေ့ဆုံမှု့ ကလဲ ပြောခဲ့ ပါတယ် ။ ဆိုတော့ အဲဒီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ က ဘယ်လိုစလုပ်နေပြီ လဲ လုပ်နေပြီဆိုလဲ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီလဲ နောက်တချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိတ်ဖွင့် ပေးစာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကမ်းလှမ်းချက် လဲပြောထားပါတယ် အဲဒါကိုရော ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ မှ ဘယ်လိုဆက်လုပ်သွားမယ် ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
ဦးအောင်ကြည် (ဖြေ) ။ ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု့ ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ပါပါတယ် ကျနော် တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တယ်ဆိုတာဟာ တကယ့် ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ ( Main Problem ) ကြီး တခုပါ ဒါကြီးကို ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ ပြေလည် သွားပြီဆိုတဲ့ အချိန် ကျလို့ရှိရင် ကျန်တဲ့ ကိစ္စ အားလုံး ဒီ ( Main Problem) ကြီးရဲ့ အကျိုးဆက်တရားများ တနည်းအားဖြင့်တော့ (Corollary) ပေါ့လေ အဲဒါတွေ ဖြစ် လာမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းသွားနိုင်မဲ့ အနေအထားလဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါတယ် …အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …။
source NLD Burma Facebook
11.August 2011:VP TAMOo Order MAH-SoeWin-MaungShein to Stop and Follow Elected Gov Plan and Orders or Military Cou
On August 12, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Biography of Presidents and Prime Ministers of Burma 1948 1988-burmese
SSA: Chinese Engineers( Tasang hydropower project) released by unknown group
WAR: Correction Fighting News” (LIB) 114 and not against IB 287″
The fight yesterday in Kehsi township was against Nawngkhio-based Light Infanty Battalion (LIB) 114 and not against IB 287 as reported earlier, says the Shan State Army. The battle which began when the Burma Army battalion “deliberately sought out” the SSA took place7miles northeast of Kehsi and lasted5½ hours, 12:00-17:30. The attackers retired after sustaining heavy casualties. “We can’t understand why they would want to startafight like that,” Maj Gen Pang Fa, SSA leader, was quoted as saying. (SHAN)
Maj Gen Kyaw Phyoe (former Triangle Region Commander) and Brig Gen Than Tin Oo, current Triangle Regional Commander, were sacked and detained on 8 August, according to Naypyitaw sources
Maj Gen Kyaw Phyoe (former Triangle Region Commander) and Brig Gen Than Tin Oo, current Triangle Regional Commander, were sacked and according to Naypyitaw sources-
Burma: Information Team and Spoke persons(Names) of Myanmar’s USDP government
On August 12, 2011 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment